Facebook – Page 15 – Central Online News
နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကို ကျော်ပြီး Celebrity Influencer Award ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝက်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Myanmar Influnencer Award 2019 ပွဲကြီးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံမှာ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Influencer Award ဆုမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးက Infulencer တွေ အများအပြား ပါရှိပြီး ဆုအမျိုးအစားပေါင်း (၁၅) […]
ငါးရံ့ခြောက်အမြီးတွေက ဘာဖြစ်တာလည်းဗျဆိုတော့ “သယ်ရ ပိုးရတော့ ပဲ့တာပေါ့” တဲ့
မြို့မ ဈေးထဲက ငါးခြောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဘက်ရောက်တော့ ကိုယ်ကလည်း ငါးရံ့ခြောက်ပက်ရှာနေတာဆိုတော့ ငါးရံ့ခြောက်မှာ ၄၀၀၀၀ ဈေးမှ ၇၀၀၀၀/၈၀၀၀၀လောက်ထိ ဈေးပေါက်နေ ပုံပါဟာက သာမန်အားဖြစ် ၅၀၀၀၀/ ၆၀၀၀၀ တန် ဈေးအမြင့်အတန်းစားထဲကဘဲ အဲ့ဒါကို ၄၅၀၀၀တဲ့ တန်တယ်ပေါ့ “အမြီးတွေက ဘာဖြစ်တာလည်းဗျ”ဆိုတော့ “သယ်ရ ပိုးရတော့ ပဲ့တာပေါ့”တဲ့ “Aww!!!,ပဲ့တာကလည်း […]
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ သင်လှူလိုက်တဲ့ ငှက်ပျောပွဲတွေက ဒီလိုနေရာတွေကို ရောက်ကုန်ပါတယ်
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အုန်းသီးနဲ့ငှက်ပျောဖီးတွေအများကြီး ဆွမ်းတော်တင်ကြပါတယ်။ ဘုရားပေါ်က ဝန်ထမ်းတွေဟာ အဲဒီငှက်ပျောသီးစိမ်းတွေနဲ့ အုန်းသီးတွေကို တစ်ရက် နှစ်ကြိမ် စွန့်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို စွန့်လိုက်တဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေက ဘယ်ရောက်သွားတာပါသလဲ? လူအချို့ ထင်နေကြသလို လွှင့်ပစ်လိုက်တာလည်း မဟုတ်သလို၊ ရောင်းစားလိုက်တာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး။ အသီးတွေကို စွန့်ပြီးတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သိုလှောင်ရုံတွေဆီကို […]
ဥ​ရောပ နိုင်​ငံကြီး​တွေ ကြားထဲက​နေ မြန်​မာနိုင်​ငံအတွက်​ ဒုတိယဆု ယူ​ပေးနိုင်​ခဲ့တဲ့ သမီးငယ်​​လေး
အီတလီ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Hippo 7th International English Olympiad ပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သော မဆုစန္ဒီဆွေက ယခုလိုဆုရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့ပုံနဲ့ ခုလို ဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။English စာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြိုင်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ အီတလီလည်း သွားရမယ်ဆိုတော့ ကောင်းသားပဲ ဆိုပြီး ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ စပြီးတော့ ပြိုင်မယ်လို့ […]
မန္တလေးတွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားကိုင်ကာ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်သူအား သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ဖမ်းဆီး
မန္တလေး တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားကိုင်ကာ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်သူအား သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ဖမ်းဆည်း ၁၈.၅.၂၀၁၉ရက်နေ့နံနက်၎း၀၀ခန့်ကမန္တလေးအောင်မြေသာစံမြို့နယ်၁၄လမ်း၆၆လမ်းတွင် အသက်၄၅နှစ်ခန့်အမျိုးသားတစ်ဦးဓါးရှည်ဖြင့်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလိုက်ခုတ်နေကြောင်းတာဝန်သိပြည်သူများမှအကြောင်းကြားလာသဖြင့် မန္တလေး တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားကိုင်ကာ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်သူအား သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ဖမ်းဆီး နန်းတော်ရှေ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေအဖွဲ့မှနယ်မြေခံအမှတ်(၁)ရဲစခန်းသို့သွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ရာ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းမှတာဝန်ရှိ့သူများရောက်ရှိ ဖမ်းဆည်းရာတွင် ပြန်လည်ခုခံနေသဖြင့်သေနတ်နှစ်ချက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဖမ်ဆည်းခဲ့ရာ ဝဲဝမ်းဗိုက်/ဝဲလက်မောင်းဒါဏ်ရာရ ၄င်းဓါးကိုင်အမျိုးသားအားမန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာနာရီဝက်ခန့်အကြာတွင်သေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည် ။ […]
ပုံမှာပါတဲ့ ဦးလေးကြီးကို ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများမြင်ဖူးသိဖူးကြမှာပါ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ဖိုက်တင်ခန်း အက်ရှင်ခန်းတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးလေးကြီးပေါ့
အရင်က ဒီလိုစာတွေ ကျနော်သိပ်ရေးလေ့မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ကြုံခဲ့ရတာက ရင်ထဲကိုတော်တော်ထိလို့ပါ ပုံမှာပါတဲ့ ဦးလေးကြီးကို ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများမြင်ဖူးသိဖူးကြမှာပါ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ဖိုက်တင်ခန်း အက်ရှင်ခန်းတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးလေးကြီးပေါ့ဒီနေ့ ကျောင်းကိုပြန်ဖို့ မှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်နေတုန်း အဲ့ဒီ ဦးလေးကြီးနဲ့စတွေ့ပါတယ်။ မြင်မြင်ချင်း အော် ဒါရုပ်ရှင်ထဲက ဦးလေးကြီးပဲ […]
ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်နေရတဲ့ ထိုင်းကလာတဲ့ ငှက်သိုက်ဘူးတွေထဲမှာ သကြားနှင့်ဆေးကုလားမတွေသာ ပါဝင်ခဲ့
ဈေးကြီး ပေးဝယ်ရတဲ့ ထိုင်းကလာတဲ့ ငှက်သိုက်ဘူးတွေထဲမှာ သကြားနဲ့ ဆေးကုလားမတွေပဲ ပါတယ်တဲ့ ဆေးကုလားမကို ငှက်သိုက်အားဆေးဆိုပြီး ထိုင်းတွေက ဗမာကို ဂျင်းထည့်ထားတာပါ။ လျှော်ဖြူ (ခ) ဆေးကုလားမ (Botanical name = Sterculia versicolor wall) အပင်က ထွက်တဲ့ အစေးကို အရည်အသွေးအလိုက် […]
အောင်ဘာလေထီဖြင့် ပြည်သူများအား ဂျင်းထည့်ခြင်း
Probability ဖြစ်နိုင်ချေ သဘောတရားဆိုတဲ့ သင်္ချာ သဘောတရားကို အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ ကတည်းက လူတိုင်း ကိုယ်စီ သင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ (6)မျက်နှာရှိတဲ့ အန်စာတုံးကို လှိမ့်လိုက်ရင် (1) ကနေ (6)အထိ ကဏန်းခြောက်လုံးစလုံးဟာ ကျနိုင်ခြေ အညီအမျှ ရှိပါတယ်။ (1) ဖြစ်နိုင်ချေ 16.67% ရှိသလို (2,3,4,5,6) ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း […]
အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ဦးရဲကြီးတို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်
ယနေ့ မေလ (၁၆)ရက်နေ့က လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲသားကြီးတစ်ဦးနဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကန်တော့နေတဲ့ပုံကို အားလုံးလည်း သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Troll များကလည်း ဟာသမြောက်တဲ့ စိတ်ကူးအတွေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ကြသလို လူအများကလည်း ဘာကြောင့်အခုလို ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမျိုး ဖြစ်ရသလဲလို့ သိချင်နေကြပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူ Min […]
ရှေ့ဘီးမကျဘဲ အရေးပေါ် ရှပ်ပြေးဆင်းသက်ခဲ့ရတဲ့ MNA လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ ဗီဒီယို
၂၀၁၉ ခုနှစ်​ ​မေလ ၁၂ ရက်​ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မန္တ​လေးအပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ​လေဆိပ်​၊ တံတားဦးမြို့နယ်​၊ မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး MNA ​လေ​ကြောင်းလိုင်း ​လေယာဉ်​ အဆင်းတွင် လေယာဉ်အရှေ့ပိုး ဘီး ချမရ ( Nose landing gear )အလုပ်​မလုပ်​တာမို့ လေယာဉ်မှူး၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် တစ်ယောက်မျှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိပဲ ပုံပါအတိုင်း […]